Lipton's Seat, ny dite oliva any Sri Lanka | Vaovao momba ny dia
Androany dia hilazako aminao ny fitsangatsanganana manan-danja iray any Sri Lanka, ny Lipton's Seat, ny teboka niasan'i Sir Thomas Lipton ny fambolena dite rehetra ary nanondrana azy ireo eran'izao tontolo izao. Sri Lanka dia iray amin'ireo firenena mitarika amin'ny famokarana sy fanondranana dite isan-karazany.
Araka ny azonao antoka ny mamintina izany dia ireto ny Fambolena orinasa Lipton ao Ceylon, iray amin'ireo marika dite manan-danja indrindra manerantany. Ireo tanimboly hafa dia any India, Indonezia ary Kenya.
Ireo fampianarana dia miorina amin'ny tendrombohitra akaikin'ny tanànan'i Haputale, afovoan'ny firenena, ary varavarankely voajanahary tonga lafatra izy io handinihana ny lemaka atsimo, afovoany ary atsinanan'i Ceylon nomena ny haavony nanakaiky ny 2000 metatra.
1 Ahoana no ahatongavana any amin'ny toeram-pambolena dite sy Lipton's Seat?
2 Inona no hatao ary inona no ho hita ao Lipton?
Ahoana no ahatongavana any amin'ny toeram-pambolena dite sy Lipton's Seat?
Mankanesa any amin'ny Haputale aho mandehana lamasinina, na avy any Colombo renivohitra na avy any Kandy na Ella. Ny tambajotran'ny lalamby any Sri Lanka dia heverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto an-tany. Fiaran-dalamby tranainy nolovaina tamin'ny fanjanahan-tany anglisy izy ireo, ary na eo aza ny zava-misy fa mivezivezy amin'ny hafainganam-pandeha somary miadana izy ireo dia mahatratra ny teboka manan-danja indrindra amin'ny firenena. Ny tsipika avy eo Ella mankany Haputale sy Kandy dia mamakivaky sary miavaka. Misisika aho, mankanesa any Haputale mitaingina lamasinina, mendrika izany.
Hankany amin'ny faritry ny fambolena avy any Haputale ny mora indrindra dia ny tuk-tuk (10 km eo ho eo sy ny vidiny azo ifampiraharahana). Amin'ity karazana fiara ity dia afaka mandeha amin'ny teboka rehetra ao Lipton ianao tsy misy olana. Ho resaka fifampiraharahana amin'ny zotra sy ny vidiny miaraka amin'ny mpamily izany, afaka miandry anao isaky ny mitsidika izy.
Misy ihany koa ny safidy tonga miaraka amin'ny fitateram-bahoaka mankany amin'ny orinasa ary rehefa avy eo dia miova ho Tuk-Tuk hanao ny dia sisa.
Ny lalana miakatra dia somary tery ary tsy voakarakara tsara. Heveriko fa ny olona te-hitsidika ireo toeram-pambolena dite miaraka amin'ny azy manokana na amin'ny fiara manofa dia tsy afaka mankany amin'ny orinasa ihany.
Lipton's Seat dia eo an-tampon'ny tendrombohitra fa soa ihany fa voavary eo ambony io. Ny fitsangantsanganana feno fahasahiana indrindra avy amin'ny orinasa ka hatrany amin'ny tampon'ny tendrombohitra. Izaho manokana dia tsy manome soso-kevitra azy raha main-tany izy, satria lavitra be io.
Inona no hatao ary inona no ho hita ao Lipton?
Mora ny valiny ny tanimboly. Izay rehetra hitantsika dia mifandraika amin'ny dite ary ny tanàna sy tanàna rehetra ao afovoany dia mivelona amin'ny dite (sy fizahantany).
Manoro hevitra anao aho hanao fitsidihana tontolo andro indray mandeha any:
Mandehana miaraka amin'ny tuk-tuk avy any Haputale ka hatrany an-tampon'ny tendrombohitra, ny Lipton's Seat ary raiso ny toerana maitso mahatalanjona ary ny isan'ny mponina manangona zavamaniry. Rehefa eo an-tampony ianao, avelanao ny toetr'andro sy ny zavona, ho hitanao ny ampahany lehibe amin'ny nosy Sri Lanka. Ny fomba fijery dia azo ampitahaina amin'ny tendron'ny Ceylon manan-danja iray hafa, ny Tendrombohitra Adam, iray amin'ireo manintona ny firenena Indiana. Amin'ity fotoana ity dia misy bar kely ihany koa izay ahafahanao mihinana dite Lipton ary mankafy ny fomba fijery.
Avy eo dia nidina tany amin'ny orinasa Lipton aho, antsasaky ny lalana. Manantena aho fa hahita ohatrinona ny ravin'ny dite notsaboin'ny mpanangona. Ary eny, milaza izany amin'ny vehivavy aho satria vehivavy daholo izy rehetra. Raha ny nambaran'izy ireo taminay dia satria manasitrana tsara kokoa ny vehivavy rehefa manangona ravina noho ny an'ny lehilahy.
Fitsidihana ny orinasa tononkalo. Izay orinasa alehanao dia hanazava ny dingan'ny famoronana ny dite, avy amin'ny fijinjana ny tanimboly, amin'ny alàlan'ny sivana ravina, fanodinana ny masinina tsirairay ary farany fanondranana sy fivarotana. Amin'ny fotoana rehetra dia hanizingizina izy ireo fa ny mpiasa dia manana fepetra miasa tsara ary ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny fahalavorariana sy ny saina amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa. Izaho manokana dia tsy maintsy niakatra tany amin'ny orinasa indroa satria nisy ny fitokonan'ny mpiasa tamin'ny andro voalohany. Ny zavatra iray tokony tsy hadino dia ny tsy ahafahanao maka sary ny atin'ny orinasa, mino aho fa noho ny tsiambaratelo matihanina.
Mialà amin'ny lalana voakapoka ary manandrama manakaiky kokoa ireo tanàna mifanila vodirindrina misy ny mpiasa ny tanimboly. Mahaliana ny mahita ny fomba fiainana ambanivohitra tanteraka an'ny mponina. Ny orinasan-dite dia manangana sekoly ary na hopitaly kely aza ao amin'ireny tanàna ireny.
Tsidiho i Haputale. Na dia tsy dia tsara tarehy aza izany, heveriko fa tsy maintsy ho hitanao ity tanàna ity, ny zava-dehibe indrindra ao amin'ilay faritra. Vahoaka be mangotraka, olona, ​​tabataba sy fiara be; eny, fivarotana dite na aiza na aiza.
Notsidihako manokana ny toeram-pambolena dite 3: Lipton, Pedro Tea State ary ny iray eo an-toerana. Te hanana fahitana manerantany kokoa aho miaraka amina orinasa salantsalany ary kely iray. Tao amin'ny orinasa teo an-toerana dia tsy afaka nitsidika ny ozinina aho, nisy koa ny fitokonana, fa ny tanimboly. Pedro Tea State, any Nuwara Eliya dia manondrana eran'izao tontolo izao ihany koa nefa tsy Lipton.
Ny fitsangatsanganana rehetra any Sri Lanka dia tsy maintsy ampidirina ao fitsangatsanganana an-dalamby amin'ny faritra be tendrombohitra any amin'ny nosy ary fitsidihana toeram-pambolena dite. Lipton's Seat dia ohatra tsara amin'ny fambolena sy ny tontolo, raha fintinina, dia fitsangatsanganana an-tsokosoko 100%.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Colombo » Lipton's Seat, ny dite oliva any Sri Lanka
Inona no ho hita sy atao any Bruges